fikelela kwi $ 700 kwiifowuni ezifanelekileyo xa utshintshela kwi & t (kuthengiswa ngaphakathi)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Fikelela kwi-700 yeedola kwi-iPhones efanelekileyo xa utshintshela kwi-AT & T (kuthengiswa ngaphakathi)
Sihleli nje ngeveki kude kube lusuku lweValentine & apos; kwaye uninzi lwenethiwekhi lubonelela ngeentengiso ezinkulu kwabo bathenga ii-smartphones ezimbini. Nangona kunjalo, kuba uninzi lwenu lukhetha isaphulelo esifanelekileyo ngaphezulu kweBOGO (thenga enye ufumane isimahla), sinezinto ezilungileyo kuwe.
I-AT & T iqhuba ukonyuselwa kwii-iPhones ezahlukeneyo kwaye ekuphela kweemfuno zokufumana isaphulelo sama- $ 700 zezi zilandelayo: tshintshela kwi-AT & T, port-kwinombolo yakho, kwaye urhwebe ngesixhobo esifanelekileyo. Nazi ii-smartphones ezifanelekileyo: i-iPhone 8 Plus, i-iPhone XR, i-iPhone X, i-iPhone XS, i-iPhone XS iMax, i-iPhone 11, i-iPhone 11 Pro, kunye ne-iPhone 11 Pro Max. Kukho ezinye izinto ezinje nge-64GB ye-iPhone 8, i-iPhone XR, kunye ne-iPhone XS.
Ukuba & apos sele ungumthengi we-AT & T, unokongeza umgca omtsha kwiakhawunti yakho, urhwebe kwisixhobo esifanelekileyo kwaye ufike kwi $ 500 kwiifowuni ezifanelekileyo. Ngoku ukuba sicacisile ukuba yeyiphi i-iPhones onokuyifumana ngesi sibonelelo kunye nento ekufuneka uyenzile, masibone iiapos ukuba zeziphi izixhobo onokuthi uthengise ngazo ukuze ufumane isaphulelo.
Gcina ukhumbula ukuba elona xabiso lokurhweba-ngaphakathi kufuneka libe yi- $ 60. Oko kuthethwa apha zizo zonke izixhobo ezifanelekileyo onokuzithengisa, njengoko zidweliswe yi-AT & T: i-iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Samsung Galaxy A50, A8 +, Qaphela8, Qaphela 9, Qaphela 10, Qaphela 10+, Galaxy S8, Galaxy S8 Active, Galaxy S8 Duos, Galaxy S8 +, Galaxy S9, Galaxy S9 +, Galaxy S9 + Duos, Galaxy S10, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 + , Galaxy S10E, Google Pixel 2, 2XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL, LG G8 ThinQ, V40 ThinQ, V50 ThinQ, Motorola Z4, RED Hydrogen One, Razer 2, kunye ne-OnePlus 5.
Ukuba ukulungele ukufumana isaphulelo se- $ 700, uya kuyifumana ngeekhredithi zebhili, oko kuthetha ukuba uya kukwazi ukufumana i-iPhone 11 64GB ngaphandle kokuhlawula nantoni na. Kwaye kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba iikhredithi ziya kuqala ngaphakathi kweebhili ezi-3 emva kokuba ukurhweba kwi-smartphone efanelekileyo kugqityiwe kwaye kuya kusetyenziswa ngexabiso elilinganayo (ukuya kuthi ga kwi-23.34 nganye) ngaphezulu kwezavenge zenyanga ezingama-30.
Jonga zonke iintlobo zeApple iPhones apha
Ungayiqhuba njani into yokufumana iJava
Iifowuni ezi-5 ezilungileyo ngeebhetri ezisuswayo